Mogadishu Journal » Howlgal lagu sugayo ammniga oo laga sameeyay magaalada Kismaayo ee xarunta Jubbada hoose
Howlgal lagu sugayo ammniga oo laga sameeyay magaalada Kismaayo ee xarunta Jubbada hoose
Mjournal : — Wararka naga soo gaaray magaalada Kismaayo ayaa sheegaya in ciidamo booliis oo ka tirsan maamulka Jubba oo islamarkaana gacan militari ka hellaya ciidamada Kenya howlgal ballaaran ka sameeyeen xaafaddaha magaalada.
Howlgalkan ayaa ahaa kuwo lugu doonayay in lugu xaqiijiyo ammaanka magaaladda Kismaayo,inkasto usan maamulka sheegin khatar ay xiligaan ka hortagayaan.
Taliska ciidamada nabad-galyada magaalada Kismaayo ayaa sheegay in ay wadayaan howlgallada tan iyo inta laga gaarayo muddo aysan carabaabin oo ay sheegen inay horey ugu qorsheeyen.
Max’ed Buula oo ah taliyaha ciidamada nabad-galyada howlgalka ka qeyb-qaadanaya ayaa k warbixiyay howlgalada ay wadaan iyagoo kaa shanaya ciidamada AMISOM ee guddaha Kismaayo jooga,waxana uu sheegey in ay soo qab qabteen dad ay ku tuhmayaan falal ammaanka wax yeelen kara.
‘”Ciidamada oo ay la socdan ciidamada AMISOM ayaa maal mahan wadey howlgalladan waxana uu ujeedkisu yahay inan xaqiijino ammaanka Kismaayo kana hortagno cid kasta oo isku dayeesa inay amniga wax yeeleyso‘”ayuu yiri taliyaha.
Max’ed Buuula ayaa sheegay in ammniga magaalada Kismaayo xiligan wanaagsan yahay, isaga oo intaa ku darray in amniga magaaladda ay si wey u sugayaann ayna ka hortagayaan khatarkasta oo wax u dhimi karta ammaanka guud ee magaaladda.
‘”Waqti kasta waxaa ay ka shaqeeyaan ciidamada nabad-galyada magaalada, iyaga oo u taagan in ay sugaan ammaanka Kismaayo wana tan xiligaan ka dhigtey in magaaladda xasi looni buxda ay ka hirgasho””ayuu ku yiri hadalkiisa taliyaha Booliska Kismaayo Maxamed Cabdi Buule.
Wasiirrka arrimaha dibada oo ka warbixisay socdaal ay ku tagtay dalka China” Sawirro”
Madaxweyne C/raxmaan Faroole oo ku eedeeyay dowladda in aysan raali ka aheyn nidaam-ka federaaliisam-ka